नगरको नेतृत्वको लागि विक्रम बोगटीको प्यानल घोषणा ! - Bulbul Samachar
bulbul बुधवार, असोज ६ गते 128 views
नेपाली काँग्रेसको बेनी नगर समितिको अधिवेशनमा विक्रम बोगटी नेतृत्वको प्यानल घोषणा भएको छ । बुधवार बेनीमा आयोजित उमेद्वार घोषणा कार्यक्रममा सभापतिमा युवा नेता विक्रम बोगटीसहित उम्मेदवारहरुको प्यानल घोषणा गरेका हुन ।?
बेनी, ६ असोज । नेपाली काँग्रेसको बेनी नगर समितिको अधिवेशनमा विक्रम बोगटी नेतृत्वको प्यानल घोषणा भएको छ । बुधवार बेनीमा आयोजित उमेद्वार घोषणा कार्यक्रममा सभापतिमा युवा नेता विक्रम बोगटीसहित उम्मेदवारहरुको प्यानल घोषणा गरेका हुन ।
एकीकृत समाजवादीको सचिवमा झाक्री !